Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiyeyaasha Shixnadaha Badda ee Shiinaha AOOD
Wareegyada silbashada badda waxaa loo qaabayn karaa cabbirro kala duwan, awoodo iyo tirooyin siyaabo kala duwan, koronto aan kala go 'lahayn oo qiimaynta korantada laga bilaabo signal ilaa 10,000V iyo qiimeynta hadda jirta ilaa 500Amps. Burushyada fiber -ka ee dahabka leh ayaa loo adeegsadaa wareegyada signalada iyo burushyada garaafyada lacagta ah oo ku yaal siddooyin qafiif ah oo biraha qaaliga ah loo isticmaalo wareegyada hadda jira. Faraantiyadaan silsiladda korantada ah waxaa lagu dari karaa isku -xirayaasha wareega fiber -optic iyo kala -goysyada Rotary dareere si ay u siiyaan xal dhexdhexaadin dhammaystiran oo loogu talagalay codsiyada dusha ama dhulka hoostiisa. Xirmooyinka silsiladda badda AOOD waxaa loogu talagalay inay ka hawlgalaan deegaannada badda ee aadka u daran.
Qaabka Hadda Danab Cabbirka (OD) Xawaaraha Shaqada
R180 Max 7A halkii giraanta
Max 100A wadarta guud ee hadda Ugu badnaan 1000VAC 72.4mm Ugu badnaan 100 rpm
R176 Max 20A halkii giraanta
Max 720A wadarta hadda Ugu badnaan 7200VAC 140mm Ugu badnaan 50 rpm
Hore: Fiber Optic siddooyinkii simbiriirixan
Xiga: Iyada oo loo marayo Sore Slip Sings
Giraanta Siibitaanka Badda